फ्रैंकफर्ट एयरपोर्टको आकर्षण अन्वेषण गर्नुहोस्
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » हवाई अड्डा » फ्रैंकफर्ट एयरपोर्टको आकर्षण अन्वेषण गर्नुहोस्
एयरलाइन्स • हवाई अड्डा • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • जर्मनी ब्रेकिंग न्यूज • समाचार • पुनर्निर्माण • जिम्मेवार • पर्यटन • यातायात • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • विभिन्न समाचार
नयाँ फ्रेप्ट भिजिटर सेन्टर २ अगस्तमा खोल्ने छ, आगन्तुकहरूको टेरेस र एयरपोर्ट टुरहरू अब अपरेट गर्दैछन्।
नयाँ मल्टिमेडिया भिजिटर सेन्टर जुन टर्मिनल १ को कन्कोर्स सी मा छिट्टै खुल्नेछ।
लोकप्रिय एयरपोर्ट टुरहरू पनि अगस्टको सुरूमा फेरि सुरू हुनेछ।
"स्मार्ट विन्डोज" पार्क गरिएको विमानमा वास्तविक समय डाटाको साथ एप्रन दृश्यमाला पूरक गर्न भर्चुअल वास्तविकता प्रयोग गर्दछ।
फ्रान्कफर्ट एयरपोर्ट अर्को आकर्षण प्राप्त गर्दैछ: एउटा नयाँ मल्टिमेडिया भिजिटर सेन्टर जुन छिट्टै टर्मिनल १ को कन्सर्स सीमा खुल्नेछ। यो नयाँ सुविधाले जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्टको आगन्तुकहरूको औंलाको टुप्पोमा आकर्षण गर्दछ। यो एक अवसर हो सबै उमेरका एयरपोर्ट फ्यानहरूको लागि उनीहरूको सबै इन्द्रियको साथ उड्डयन व्यवसाय अन्वेषण गर्ने। मार्शलरको भूमिकामा स्लिप गर्ने र जेटलाई यसको पार्किंग अवस्थाहरूमा गाईड गर्ने बारेमा के हुन्छ? तपाईं यसलाई यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ! वा एयरपोर्टको स्वचालित ब्यागेज कन्वेयर प्रणालीको घुमाउने सुरुnelहरूको माध्यमबाट चोट पुर्‍याउँदैछ? भर्खर एक भर्चुअल रियलिटी हेडसेट राख्नुहोस् र उत्साहजनक मोशन राइड सुरू गर्नुहोस्! प्रदर्शनीको केन्द्रबिन्दु, द ग्लोब, ले तपाईंलाई खेलका साथ विश्वव्यापी उड्डयन कार्यमा अनुभव गर्न दिन्छ - र फ्रान्कफर्ट एयरपोर्टले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाको बारेमा सिक्न।
१,२०० वर्ग मिटर फैलिएको प्रदर्शनीको बाटो चम्किरहेको ओभरहेड पट्टिहरूले संकेत गर्दछ जुन विशाल विमानले उडान लिन र अवतरण गर्न प्रयोग गरेको पथहरूसँग ठ्याक्कै मिल्छ। ठीक सुरूमा, एयरपोर्ट सिटीको 1,200 55-वर्ग-मीटर मोडेल (१: 1० को स्केलमा) पाहुनाहरूलाई अन्वेषणको भर्चुअल यात्रा शुरू गर्न आमन्त्रित गर्दछ। सम्पूर्ण एयरपोर्टको विस्तृत प्रतिक्रियाहरू र यसको -०० ओडका भवनहरू अन्तर्क्रियात्मक रूपमा आईप्याड प्रयोग गरी पत्ता लगाउन सकिन्छ। Interest० भन्दा बढी डिजिटल अंकहरू पाठ, भिडियो र थ्रीडी एनिमेसनको रूपमा रोचक जानकारीको सम्पत्ति प्रदान गर्दछ। "स्मार्ट विन्डोज" पार्क गरिएको विमानमा वास्तविक समय डाटाको साथ एप्रन दृश्यमाला पूरक गर्न भर्चुअल वास्तविकता प्रयोग गर्दछ। Zeppelins र बर्लिन एयरलिफ्टको बारेमा आकर्षक कथाहरू पनि समयमै फिर्ता यात्रामा आनन्द लिन सकिन्छ।
"द ग्लोब", एक विशाल अन्तरक्रियात्मक एलईडी भित्ता २ 28 मनिटर स्क्रिनहरू सहित, एफआरए र अन्य बिन्दुहरूको बीच सबै चलिरहेको उडानहरूलाई वास्तविक समयमा विश्वव्यापी बनाउँदछ। यो ग्लोबल जडानको विशाल वेब र अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन को जटिलताको अनुभव गर्न एक प्रभावशाली तरीका हो।
लोकप्रिय एयरपोर्ट टुरहरू पनि अगस्टको सुरूमा फेरि सुरू हुनेछ। स्टार्टर टुर 45 120 मिनेट लामो हुन्छ र एयरपोर्ट र यसको गतिविधिहरूमा आंकडा, डाटा र तथ्यहरूको रोमाञ्चक प्रवाह प्रदान गर्न प्रत्यक्ष कथा समावेश गर्दछ। १२० मिनेटको XXL यात्रा पर्दा पछाडि अधिक विस्तृत हेराई प्रदान गर्दछ। अतिथिहरूले ग्राउण्ड ह्यान्डलिंग अपरेसनहरू, टेक अफहरू र लैडिingsहरू विमानको नजीकबाट जाँदा, र नयाँ फायर स्टेशन नम्बर १ र एयरपोर्टको दक्षिणमा नयाँ टर्मिनल build निर्माण गर्न निर्माण परियोजनाको झलक पनि पाउँछन्।
एयरपोर्टको भ्रमणलाई बाहिर खेल्ने उत्तम तरिका भनेको लोकप्रिय आगन्तुकहरूको टेरेसबाट दृश्यको आनन्द लिनु हो। टर्मिनल २ मा यो मञ्चले संसारभरिबाट अवतरण गर्ने र उडान गर्ने र एयरपोर्ट एप्रनमा हडबड गतिविधि गर्ने विमानहरूको चराहरूको आँखाको परिप्रेक्ष्य प्रदान गर्दछ। यसको पुन: उद्घाटन मनाउन, प्रवेश सीमित समयको लागि निःशुल्क छ - कुनै पनि समयमा आगन्तुकहरूको संख्या टिप्नका लागि, तथापि, यो समय स्लट आरक्षित गर्न आवश्यक छ।
आरक्षण सुविधा को लागी सबै सुविधाहरु को लागी आवश्यक छ र मा टिकट शप मा गर्न सकिन्छ www.fra-tours.com। दुर्भाग्यवश, साइटमा त्यसो गर्न अझै सम्भव छैन। जर्मन राज्य हेसेमा ग्रीष्म schoolतुमा हुने बिदाको बेला, आगन्तुक केन्द्रका पाहुनाहरूले एफआरएको सार्वजनिक पार्कि facilities सुविधामा निःशुल्क पार्क गर्न सक्छन्: गाडी हाँक्दा केवल टिकट लिनुहोस् र यसलाई भिजिटर सेन्टरको प्रवेश द्वारमा मान्य बनाउनुहोस्। दिन ट्रिपर्सका लागि, फ्रान्कफर्ट एयरपोर्ट जहिले पनि सार्थक गन्तव्य हुन्छ - स्वाभाविक रूपमा जबकि संक्रमण रोक्नको लागि वर्तमान नियमहरूको पालना।
जान्न महत्त्वपूर्ण छ: आगन्तुकहरूको टेरेस जस्तै, मल्टिमेडिया फ्रेपोर्ट भिजिटर सेन्टर पनि सबै प्रकारका घटनाहरू समेट्नका लागि बुक गर्न सकिन्छ।
विश्व फेसन: मा ताइवान र श्रीलंका को भूमिका ...
IGLTA ग्लोबल कन्भेन्सन मिलान अक्टोबर २ 26 मा आयोजित हुन ...